Milestone - Kooxda Teknolojiyadda Sirdoonka ee Nantong Guosheng
①GMF4027LX xarun saareysa shanta-axsaab gantry centre ayaa loo dhoofiyay Jarmalka, waxaana horumar cusub laga sameeyay teknolojiyadda shan-axis. Set up Chelsea Robot Automation (Nantong) Co., Ltd., maily marka la samaynayo qalabka been abuurka, qadka soosaarka alaabada CNC.
Dib-u-habeyn wadaagga iyo liistada guud, waxaa dib loogu magacaabay Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd. Set up Investa (Jiangsu) Mashiinka Qalabka Co., Ltd. CMC lathe waxaa lagu soo daray khadka wax soo saarka.
Tikniyoolajiyad laga soo bandhigay Taiwan, ayaa la dejiyay Jiangsu Dawei Precision Technology Co., Ltd., iyo mashiinka caajiska-bulukeetiga ee toosan ayaa lagu soo daray khadka wax soo saarka. Markii ugu horreysay, waxaa la guddoonsiiyay mid ka mid ah “Top 30 Enterprises of China ee Mashiinka Qalabka Mashiinka”.
Dufcaddii ugu horreysay ee 4S bakhaar oo Guosheng Group ah ayaa la sameeyay.
Waxaa lagu taxay sidii qaybta xukuma ee Ururka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka, wuxuu galay marxalad horumarineed oo dhameystiran oo ku saabsan sumadaynta madaxabanaan ee aaladda mashiinka CNC oo ah ganacsiga aasaasiga ah.
Nantong Guosheng Precision Metalmaking Co., Ltd. waxaa dib loogu celiyay Tongzhou, waxaana dib loogu magacaabay Nantong Guosheng Precision Machines Co., Ltd.
Wuxuu galay qeybta waxsoosaarka ee mashiinada xargaha indhaha, wuxuuna xaqiiqsaday hormarka horudhaca ah ee ganacsiga mashiinka qalabka CNC.
Iyada oo ku saleysan kordhinta warshadaha ee warshadaha, sameysa Nantong Guosheng Foundry Co., Ltd., soo saar kabaha madaxabanaan. (Sannadkii 2018, Guosheng Foundry waxaa loo magacaabay Nantong Guosheng Mashiinka Qalabka Co., Ltd.)
Qalabka mashiinka ugu horreeyay ee EDM Guosheng wuxuu kasoo muuqday Bandhigga Mashiinka Qalabka Mashiinka ee Shanghai.
Warshadda Birta Guosheng ee Birta-samaynta Wershadda waxaa loo asaasay inay ku lug yeelato meheradda meheradda ee alxanka birta saxda ah waxayna u saamaxday Guosheng inuu sii wado dhammaystirka iyo xariifnimada ugu dambeysa.